कोठीले दिन्छ क्यान्सरको संकेत ! – Etajakhabar
कोठीले दिन्छ क्यान्सरको संकेत !
काठमाडौँ । घातक छालाको क्यान्सर भएका अधिकांश मानिसमा झन्डै २० ओटा कोठी पाइएको विज्ञहरुले बताएका छन् । अनियमित वा परिर्वर्तित कोठी छालाको घातक क्यान्सर मेलानोमाको संकेत भएको समेत वैज्ञानिकहरुको बुझाई छ ।
हर्वाड टीएच चान स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका अनुसार कोठी रोग लाग्ने एउटा चेतावनी मात्र होइन बरु लक्षण पनि हो । अध्ययन अनुसार हरेक तीन जना मेलानोमाका बिरामीमध्ये दुई जनामा २० भन्दा बढी कोठी थिए । तुलनात्मक रुपमा थोरै मेलानोमाका बिरामीमा अझै खतरनाक कोठी थिए । मानिसको शरिरमा हुने कोठीको संख्या र कोठीको प्रकार रोग उत्पन्न हुने पक्रियासँग सम्बन्धित हुने अध्ययनको नेतृत्व गरेका डा. एलन गेलरले बताए ।
कोठीका कूल संख्या, अनियमित कोठी र मेलानोमा अर्थात छालाको घातक क्यान्सरबीचको सम्बन्धबारे अनुसन्धानकर्ताहरुले अध्ययन गरेका थिए । मेलानोमा भएका ५५६ बिरामीको अध्ययन गर्दा ६६ दशमलब ४ प्रतिशतमा २० ओटासम्म कोठी थिए । तर ७३ दशमलब ३ प्रतिशतमा कुनै नियमित कोठी पाइएन । कोठी र मेलानोमालाई संयोग मात्र भन्न नसकिने अध्ययन टोलीको निस्कर्ष छ ।
‘मेलानोमा भएका व्यक्तिमा कोठी हुने साझा समस्या लगायत हाम्रो अध्ययनले अनगिन्ति स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ सन्देश दिएको छ,’ डा.गेलर भन्छन् । त्यसो त धेरै कोठीको गणनाको भरमा चिकित्सकले बिरामी उच्च खतरामा छ भन्ने यकिन गर्न नसक्ने पनि उनले बताए । कोठीमा हुने परिबर्तन केबल मेलानोमाको मात्र संकेत नभएको उनी बताउछन् । स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले छापेको छ ।
यसअघिको एक अध्ययनले दाँया पाखुरामा ७ भन्दा बढी कोठी भएका व्यक्तिमा शरिरभर ५० भन्दा बढी कोठी भएका व्यक्तिमा भन्दा नौ गुणा मेलानोमाको खतर हुने देखाएको थियो ।
अमेरिकी क्यान्सर सोसाईटीका अनुसार जब मेलानोमा बाक्लो हुँदै जान्छ यो फैलिने उत्तिकै बढी सम्भवाना हुन्छ । तर, सामान्यतया १ एमएम मोटाई भन्दा कम भएको ट्युमरमा मेलानोमा फैलने धेरै न्यून सम्भावना भएको बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक २५, २०७३ समय: ९:३९:५१
‘जाइरा’मा नम्रताको मार्शल आर्ट लुक्स, पत्रकार सम्मेलनमा आइन यसरी
आफु प्रहरी इन्काउन्टर पर्ने डरले मानव अधिकार संगठनलाई ‘जीवन रक्षासहित आत्मसमर्पण कार्यमा सहयोग गरिपाउ’ भन्दै लेखेको पत्र बाहिरियो, पत्रसंगै गोरेको पक्राउ नभई आत्मसमर्पण हुनसक्ने अनुमान
प्रदिपलाई फिल्ममा खोसाखोस, भ्याई नभ्याई छ उनलाई
सलमानले प्रियंका हुँदा हुँदै फेरी किन खोजे दिशा पटानीको साथ र दिए आँफुसँग जोडीएकोमा बधाई
करीना , सोनम , स्वरा र शिखा यसरी बिकिनीमा हिँडेपछि…
हेर्दा १५ बर्ष जस्तो देखिने एक किशोरको शव बेवारिसे अवास्थमा फेला पर्यो